POD စခန်းချ – အိပ်စက်ခြင်းစည်ဥရောပ | BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
ပထမဦးဆုံးအရွယ်အစားကိုရွေးပါ (ရှည်လျားသော), သစ်သားအမျိုးအစားကို (Spruce, Larch, ThermoWood) နဲ့ options ( ပြတင်းပေါက်, Türart, ပစ္စည်းများ) နှင့်အပြင်ပန်းအရောင်.
(2,301 ဒီ post ကိုကြည့်ရှုပြီးမှအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များ)
2 အပေါ်အတွေးများPOD စခန်းချ – အိပ်စက်ခြင်းစည်ဥရောပ”
roger cavegn လို့ပြောတယ်:
18. January 2015 မှာ 8:08
18. January 2015 မှာ 13:43
သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. Die Unterlagen haben wir Ihnen per E-Mail zugestellt.
ကျွန်ုပ်တို့ကူညီမှပျော်, rufen Sie uns an, တယ်လီ. 052 347 37 27 oder geben Sie uns Ihre Telefonnummer bekannt.